Fomba bebe kokoa hikendrena ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao | Fifamoivoizana hiara-miasa
by Beverly Little on Enga anie 10, 2021
Raha manana fikambanana an-tserasera ianao, dia tokony hino fotsiny fa mikendry ny fivezivezena ianao. Ny filaharana dia miova isa-minitra isan'andro ary miankina amin'ny fifamoivoizana entina mankany amin'ny tranokalanao izany.
09/24/2021 01:40 hariva GMT
Ny foto-kevitra iray manontolo izay milalao eto dia ny ahafahanao mitondra olona hitsidika ny tranokalanao. Ny valiny omen'izy ireo dia hiafara ho fotoana ahazoanao mpitsidika bebe kokoa. Izany dia midika fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny Internet tranonkala.
Misy fomba isan-karazany amin'ny fomba ahaizanao mikendry ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao. Anisan'ireny ny marketing amin'ny mailaka, ahazoana antoka ny fametrahana ireo tag HTML ao amin'ny pejinao, ary aorian'izay dia miresaka momba ny tranokalan'ny hafa. Raha mila fanazavana misimisy kokoa dia manohiza mamaky etsy ambany.
Short lahatsoratra Marketing
Post marketing dia iray amin'ireo teknika andrana sy voavaha amin'ny fanaovana mpitsidika kendrena mankany amin'ny tranokalanao. Arakaraka ny mahasoa ny pejinao no mahamaro ny mpitsidika anao.
Ahoana raha tsy manana fironana amin'ny famoronana fitaovanao manokana ianao?
Mety ho tsy manana fotoana ampy ianao hiatrehana asa hafa ankoatry ny fitantanana ny tranokalanao sy ireo olana an-tserasera hafa.
VAKIO IZANY Fifamoivoizana kendrena no zava-miafina amin'ny varotra tsara!
Ny zava-drehetra, ny olana voalohany aminao dia ny fahafahanao manolotra ny kalitaon'ny mpamaky amin'ny pejinao. Ary miaraka amin'ny fifanarahana lehibe amin'ny andraikitra ara-pitantanana sy ara-barotra eo am-pelatananao, tsy afaka mandray asa hafa ianao, na izany aza, satria mila mametraka ny sainao amin'ny fanatanterahana ny fifamoivoizana sy ny fitarihana ianao, dia afaka manafoana olon-kafa ianao tolotra hampiroborobo kokoa ny tetikasanao amin'ny varotra. Azonao atao ny mampiasa mpampiasa matoatoa ho an'ny tranokalanao.
Miresaka ny bilaogin'ny hafa
Fomba iray hafa ahazoana fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny alàlan'ny firesahana amin'ireo bilaogin'olon-kafa. Olona marobe no tsy miasa intsony mba hahatakarana ny zava-bitany. Amin'ny fijerena ireo tranokalan'ny bilaogy malaza sy ny famelana ny resaka ara-pahalalana momba ny lohahevitra ekenao, ireo izay mamaky ny lahatsoratranao dia mety hiafara amin'ny fahalianana hanaraka ny rohy anao ary hahita bebe kokoa momba anao sy izay azonao momba foto-kevitra manokana mampanahy azy ireo.
Ny Torolàlana HTML
Mety ho somary teknika ho an'ny hafa ny fiteny fanoratana HTML na hypertext. Hitanao fa zava-dehibe ny fampidiranao ireo marika lohateny marina mba hampisehoan'ny motera fikarohana avy hatrany ny info izay mamintina ny momba ny tranokalanao. Misy ireo teny fanalahidy sy fitenenana ilaina ao amin'ny mari-pamantarana Meta Keyword sy ny famaritana Meta.
Araka ny mety ho efa takatrao ankehitriny, dia tsotra ny mikendry ny fivezivezena mankany amin'ny tranokalanao nomena anao mba hahafantaranao ireo zava-dehibe tokony hatao. Maninona no miandry rehefa afaka mahazo ny pejinao ianao ambony ankehitriny?
Ny filaharana dia miova isa-minitra isan'andro ary miankina amin'ny fifamoivoizana entina mankany amin'ny tranokalanao izany.
Ny foto-kevitra iray manontolo izay milalao eto dia ny ahafahanao manintona olona tsirairay hitsidika ny tranokalanao. Misy fomba isan-karazany amin'ny fomba hahafahanao mikendry ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao. Post marketing hatreto dia iray amin'ireo fomba andrana sy voamarina amin'ny fanaovana mpitsidika kendrena mankany amin'ny tranokalanao. Hitanao fa zava-dehibe ny fampidiranao ireo marika lohateny marina mba hampisehoan'ny motera fikarohana avy hatrany ny pitsopitsony izay mamintina ny momba ny tranokalanao.
Filed Under: Content Creation, Targeted Traffic, Fampiroboroboana ny tranokala